आन्दोलनरत स्वास्थ्यकर्मीले उठाएका ४ माग मन्त्रीस्तरमै छलफल गर्नुपर्ने – Health Post Nepal
२०७७ पुष २४ गते २०:०१
‘फुटबलमा झेली गरे रेड कार्ड, राजनितिमा नियुक्ती ’ (फोटोफिचर)
आन्दोलनरत स्वास्थ्य संयुक्त संघर्ष समिति उठाएका ४ वटा मागहरू मन्त्रीस्तरमा छलफल गर्नुपर्ने भएको छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालय र समितिको प्रतिनिधिबीच भएको छलफलमा अन्य बुँदामा शैद्धान्तिक सहमति भए पनि ४ वटा बुँदामा सहमति जुट्न सकेको छैन।
मन्त्रालयका प्रमुख विशेषज्ञ डा. रोशन पोखरेलले छिट्टै मन्त्रीस्तरको छलफलपछि निष्कर्षमा पुगिने बताए।
‘दुवै पक्षका प्रतिनिधिबीच केही बुँदामा शैद्धान्तिक छलफल भए पनि केही बुँदा माथिल्लो निकायमै छलफल गर्नुपर्ने देखिएको छ’, डा. पोखरेलले हेल्थपोस्टको कुराकानीमा भने।
‘राजनीतिक निर्णयका बुँदा मन्त्री ज्यू कहाँ लैजानुपर्ने हुन्छ,’ डा. पोखरेलले भने, ‘उहाँसँगको छलफलपछि निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ।’
तर, डा. पोखरेलले कुन—कुन बुँदामा माथिल्लो स्तरमा छलफल गर्नुपर्ने बारेमा स्पष्ट पारेनन्।
त्यसैगरी, समितिका संयोजक डा. लोचन कार्कीले १८ बुँदामा छलफल भए पनि केही बुँदामा दुवै पक्ष सहमतिमा पुग्न नसकेको बताए।
‘दुवै पक्षका प्रतिनिधिले १८ बुँदामा कमन डाफ्ट गरेका छाैं। केही बुँदामा अझै सहमति जुट्न सकेको छैन,’ डा. कार्कीले भने, ‘हामीले पनि अन्य साथीभाईसँग भोली छलफल गर्छौं। उहाँहरूले माथिल्लो निकायमा छलफल गरेपछि आइतबार पुन वार्ता बस्ने योजना छ।’
‘केही शैद्धान्तिक छलफल भएको छ। केही बुँदा कसरी अगाडी बढ्ने भन्ने खालको छलफल भएको छ। ४ वटा बुँदामा टुगोंमा नलागेकोले पुनः आइतबारको लागि वार्ता बस्ने तयारी भएको छ,’ डा. कार्कीले भने।
स्वास्थ्यकर्मीको माग सम्मोधन गर्नका लागि मन्त्रालयले गत १२ गते समिति बनाएको थियो।
स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रमुख विशेषज्ञ डा. रोसनको पोखरेलको संयोजकत्वमा वार्ता समिति गठन गरेपछि संयुक्त संघर्ष समितिले डा. लोचन कार्की संयोजकत्वमा समिति गठन भएको थियो।
दुवैपक्षबीच पटक—पटक वार्ता हुँदा पनि दुई हप्तासम्म सहमति जुटन सकेको छैन।
विभिन्न स्वास्थ्यका पेशागत संगठनले स्वास्थ्य क्षेत्रको हकहितको लागि विभिन्न १८ वटा मुद्दालाई अगाडी सारेका छन्।
स्वास्थ्य सेवालाई संघ अन्तर्गत राखी पुर्नसंरचना गर्नुपर्ने साथै स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन, व्यवस्थापनका लाग छुट्टै स्वास्थ्य सेवा ऐन हुनुपर्ने, स्वास्थ्य सेवा विशिष्ठकृत सेवा भएको हुनाले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको सचिव स्वास्थ्य सेवाबाट नै हुनुपर्ने लगायत स्वास्थ्य संस्था तथा स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत जनशक्तिलाई सुरक्षित वातावरणमा काम गर्न तथा अभद्र व्यवहार नहोस् भन्नका निम्ति घटनामा संलग्न व्यक्तिलाई बिना धरौटी हिरासतमा राखी कारबाही गर्ने कानून बनाई लागू गर्नुपर्ने जस्ता विषयमा सहमित जुट्न नसिकएकाे पाइएकाे छ।
Tags: आन्दोलन, स्वास्थ्य संयुक्त संघर्ष समिति